`၀င်ပြီလား သမီး .. ကဲ မင်းဗမာစာ ၊ ဗမာစကားတတ်ပြီဆိုပါတော့ .. ။ မင်း ရန်ကုန်က မာစတာသင်တန်းတွေ တက်ခွင့်ရမယ်။ မင်းဘူးဦးသြဘာသရဲ့ စာကောင်း စာခန့်တွေဖတ်လို့ရမယ်။ ပြီးတော့...´
`သြော် ကောင်းလိုက်တာနော် အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးရော ....... ´
`အစိုးရ ... အစိုးရ .. ဒီအစိုးရတော့ကွာ .. ဒီလိုရှိတယ် ... ဒယ်ဒီပြောမယ်´
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:21 PM
GSM တွေဝေနေတဲ့ ချာတိတ်တွေ မြင်ချင်စမ်းပါဘိ.....
BLOGGER များသို့ said...
blog များကို အားပေးသူတစ်ဦး said...
KP @ SG said...
The original post is here. http://myanmaroa6.blogspot.com/2007/05/blog-post_31.html . The post title is "Ein Mat Htel Mar".
မလင်းလက်ကြယ်စင်ရေ - ဒီစာလေးက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ မှီငြမ်းခြင်းမရှိ ရေးထားခဲ့တာပါ။ အောက်တိုဘာလလောက်ကတည်းက ဒီစာကို Fwd Mail တွေအနေနဲ့ တွေ့ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆီကို သုံးစောင်ထက်မနည်း ရောက်လာခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်ကတည်းက ရေးသူနာမည်မပါလာတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တဆင့်တဆင့် ပြန့်သွားတဲ့အခါ သူရေးသလိုလို၊ ကိုယ်ရေးသလိုလို ဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း တခါတလေ Fwd Mail လေးတွေထဲက သဘောကျတာလေးတွေ တင်တင်နေဖြစ်တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ပြသနာမရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ပြန့်ပြန့်၊ ဘယ်မှာပဲ တင်တင်၊ ဖတ်တဲ့လူ ဖတ်ရရင် ပြီးတာပါပဲ။ ဖေါ်ပြထားတဲ့ စာစောင်နဲ့လည်း ပြောစရာ စကားမရှိပါဘူး။ သူတို့လည်း ဖေါ်ပြသင့်တာထင်လို့ ထည့်ဖေါ်ပြထားတာဖြစ်မှာပါလေ။
I like reading blog. I wanna to be blogger like u. I think i am too busy to writeablog. But i also knew that most of the blogger are very busy. Although they can write their blog. I wish good luck for u especially with your lover.